सिकिम Archives - Suvham News
Mar102018 by gsmktmNo Comments
सिक्किममा पहिलोपटक जहाज अवतरण
10 मार्च 2018 सिक्किमको को दिन सिक्किमको पाक्योङ हवाइ अड्डाले रच्यो इतिहास । 72 सिटे यात्रुवाह्क स्पाइस्जेट विमानले सकुशल अवतरण गर्‍यो । सिक्किम र सिक्किमे जनताको निमित्त यो गौरवमय क्षण हो । एस डी एफ पार्टी र सरकारको ऎतिहासिक उपलब्धि । अब पर्यटनको क्षेत्रमा सिक्किम देशकै अब्बल राज्य बन्ने निश्चित ।
Sep22017 by gsmktmNo Comments
सिक्किममा बंगाल पुलिसको गोलिले नेपालि भाषिको हत्या यो दादागिरी कहिले सम्म?
Raj Kumar Pradhan बंगाल पुलिसको दादागिरीको हामी घोर विरोध गर्दछौ । -------------------------------------------------------------------- बंगाल सरकारको वास्तविक चरित्र उदाङ्गो भएको छ कि बंगालको सीआईडी होस या पुलिस होस सिक्किम सरकार या सिक्किम पुलिसको विना अनुमति सिक्किम भित्र प्रवेश गरी एक व्यक्तिको ज्यान लिएर बंगाल सरकारले आतंकवादीको परिचय दिएकोछ । सिक्किम पुलिसले प्रत्यक्ष परोक्षरुपमा ती बंगालको सीआईडी भनाउदाका परिचय पत्र साथै कोर्टको कागज माँग्दा दिन नसक्नुले नै यो प्रमाणित भएको छ । सिक्किम अनि सिक्कि पुलिसको सोझोपनको फाईदा उठाएर बंगाल अनि बंगाल पुलिसले यसरी पटक पटक हेप्ने काम गरेकोछ । बंगाल पुलिसको एसपी लगायत टोलीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर कड़ा कानुनी कारबाही हुनु पर्छ । सिक्किम भुमिमा भएको यस गोली हत्या काण्डको अनि बंगाल सरकारको दादागिरीको हामी समस्त सिक्किमवासी घोर विरोध गर्दछौ ।
Aug302017 by gsmktmNo Comments
सिक्किमका मुख्य ,मन्त्रि पवन चाम्लिङ राईले सिक्किममा गाई हत्या पुर्ण रुपमा प्रतिबन्द लगाउनु भयको छ
दुई दिने सिक्किम बिधानसभा सत्र समाप्त । गौ हत्या रोकथाम बिधेयक पारित । गौ हत्या गैर कानुनी मानिने छ औ दोषी विरुद्ध आवश्यक कार्वाही गरिने छ । बुडा गाइहरुको हेरचाह गौशालामा गरिने छ । सरकारको ऎतिहासिक निर्णय प्रति आभार व्यक्त गरिन्छ भन्दै सिक्किमका नेपाली भाषि नेताहरले खुसि मनायर फेसबुकमा पोष्ट गरेका छन। आदिवासि, राई , भुटुया , लेप्चा, तामाङ, प्रधान, मगर,लिम्बु, गुरुङ, बाहुन, क्षेत्रिको बाहुल्य रहेको सिक्किमको विधान सभाले एतिहासिक निर्ण गर्दै गाई हत्या गर्नु जग्न अपराध भन्यको छ।
Aug172017 by gsmktmNo Comments
सिक्किममा बस दुर्घटना, ४ नेपालि भाषिको घटना स्थल मै मृत्यु केहि गम्भिर घाईते भयका छन
Raj Kumar Pradhan/ Barap Namgyal Bhutia /Sikkim गान्तोकबाट उत्तर जिल्लाको मगन जाने क्रममा एसएनटी बस एसके 01 बी 0241 राङराङ नजिक दुर्घटना हुँदा ४ जनाको घटना स्थल मै मृत्यु भएको छ भने अन्य 23 जना घाईते भएका छन्। दुर्घटनामा घायल हुनेहरूलाई उद्दार गरेर उपचारको निम्ति मगन अस्पताल लगिएको छ राहत एवं बचाव कार्य युद्ध स्तरमा चलिरहेछ। बचाव कार्यमा पलिस प्रशासन, सेना र स्थानीय मानिसहरू जुटेका छन्। घाइते हुनेहरूलाई पहिला मगन जिल्ला अस्पताल लगिएको छ भने, प्राथमिक उपचारपछि गम्भिर अवस्था रहेकालाई रेफर गरिने छ। दुर्घटना स्थलमा जिल्लापाल, पुलिस अधिक्षक, जिल्ला प्रशासनका अघिकारी समेत अन्य पनि बचावमा जुटेका छन्। घटना स्थलबाट घाइते भएकाहरूलाई उद्दार गर्ने काम लगभग पुरा भएको छ। यो दुर्घटना लगभग बिहान 11.15 बजे भएको हो। अप्पर राङराङमा विगत 18 सितम्बर 2011को भुईचालोले भत्काएको चर्च नजिकको गोलाईबाट बस दुर्घटनाग्
Aug62017 by gsmktmNo Comments
जीवन मा एउटा निर्दिष्ट सिद्धान्त हुनुपर्छ
Debee Katwal/ Sikkim-- जीवन मा एउटा निर्दिष्ट सिद्धान्त हुनुपर्छ अनि कर्तब्य संग जिम्मेवारी बूझ्नु पर्छ ।========================== शीत र थर्थराउदो जाडो मा बिहानै पुजारी मन्दिर बाहिर निस्किए , उनी जगनाथलाई देखेर हैरान थिए, ” आज सारै जाडो छ , मलाई त भरोसा थिएन कि आज मन्दिर को आरति मा कोहि आउँछ भनेर , तेसैकारण मैले केही पनि गरेको थिएन , अब तपाईं एकजना को लागि तेत्रो के गरि बस्नु होला र… आज आरती नगरू सारै जाडो छ आराम गरू?”, पुजारीले भने “पण्डितजी म एउटा गरिब खेतीवाला हू , म सधै बिहान सिङताम बजारमा परेवालाई चारो हाल्न जान्छु , त्याहा धेरै परेवा हुन्छन तर यदि कोहि दिन एउटा परेवा हुँदा पनि चारो खुवाएरै आउछु। “, जगनाथले भने। पुजारी तेति सुनेपछी छक्क् परे, अनि मनमनै भगवानलाई माफी मागे अनि आरती को सामाग्री तयारी मा लागे ,पूरा मन्दिर सफाई गरे , अनि विधि-विधान को साथ आरती सुरु गर्नु भयो।2घण्
जीवन मा एउटा निर्दिष्ट सिद्धान्त हुनुपर्छ अनि कर्तब्य संग जिम्मेवारी बूझ्नु पर्छ ।
Debee Katwal/ Sikkim ---- जीवन मा एउटा निर्दिष्ट सिद्धान्त हुनुपर्छ अनि कर्तब्य संग जिम्मेवारी बूझ्नु पर्छ । शीत र थर्थराउदो जाडो मा बिहानै पुजारी मन्दिर बाहिर निस्किए , उनी जगनाथलाई देखेर हैरान थिए, ” आज सारै जाडो छ , मलाई त भरोसा थिएन कि आज मन्दिर को आरति मा कोहि आउँछ भनेर , तेसैकारण मैले केही पनि गरेको थिएन , अब तपाईं एकजना को लागि तेत्रो के गरि बस्नु होला र… आज आरती नगरू सारै जाडो छ आराम गरू?”, पुजारीले भने “पण्डितजी म एउटा गरिब खेतीवाला हू , म सधै बिहान सिङताम बजारमा परेवालाई चारो हाल्न जान्छु , त्याहा धेरै परेवा हुन्छन तर यदि कोहि दिन एउटा परेवा हुँदा पनि चारो खुवाएरै आउछु। “, जगनाथले भने। पुजारी तेति सुनेपछी छक्क् परे, अनि मनमनै भगवानलाई माफी मागे अनि आरती को सामाग्री तयारी मा लागे ,पूरा मन्दिर सफाई गरे , अनि विधि-विधान को साथ आरती सुरु गर्नु भयो।2घण्टा वाद आरती पूरा भयो ,
Aug22017 by gsmktmNo Comments
सकारात्मक दृष्टि – सकारात्मक सोच
Debee Katwal---- सकारात्मक दृष्टि सकारात्मक सोच ======================== केहि साल अघि को कुरा हो ।गान्तोक मा प्रेम नाम भएको एक नौजवान थियोे । उसले बिज्ञान मा मास्टर गरेको थियो। एक पल्ट उसलाई थाहा लाग्यो कि सिक्किम राज्यमा 200 को लागि जगह खाली भएको छ । प्रेम नोकरी को खोजी मै थियो, त्यो थाहा हुनसाथ उसले तुरुन्तै अर्जि दियो । उ उत्सुक थियो तर जब नतिजा आयो त्याहा प्रेम को नाम थिएन। त्यो कुरा जब उसको साथीहरूले थाहा पाए उनिहरू आस्चर्य भए अनि प्रेम अति दुखी भएको छ भन्ने सोचे , तेहिकारण उसलाई आश्वासन दिन सबै प्रेम को घर गए। प्रेमले सथिहरूको कुरा सुनेर हास्तै-हास्तै भन्यो , “साथी हो , यो कुरामा दुखी किन हुनु ? मलाई त त्यो थाहा पाएर आनन्द भएको छ कि सिक्किम मा म भन्दा ज्यादा योग्यता भएका 200 युवा रहेछन।योग्य ब्याक्तिहरू को अभाव नहुनु भविष्य को निम्ति उत्तम संकेत हो म आज औधी खुसी छु । सबै साथि
Jul192017 by gsmktmNo Comments
सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री नरबहादुर भण्डारीको अन्तिम शवयात्रामा हजारौ नेपालि भाषि सहभागि भयका छन्
Raj Kumar Pradhan/ Sikkim सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारीको अन्तिम शवयात्रामा श्रद्धाञ्जली दिन हजारौंको संख्यामा उर्लिइएका शवयात्रीहरु ।
Jul132017 by gsmktmNo Comments
आज २०४ औं भानु जयन्ती नेपाल सहित सिक्किममा भव्यताका साथ मनाईयो।तस्बिर सहित
"२०४ औं भानु जयन्तीको अवसरमा नेपाली भाषा प्रेमी सम्पुर्ण मानुभावहरुलाई हार्दिक मंगलमय शुभकामना।"
Jun202017 by gsmktmNo Comments
दार्जीलिङ पहाडको गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्यको माग संविधानसम्मत माग हो । -भिम दाहाल
Bhim Dahal--- दार्जीलिङ पहाडको बासभूमिको मागमा भएको ५० वर्षभन्दा लामो समय अघिदेखिको मागको आन्दोलनमा १३०० भन्दा ज्यादा ज्यान गएको छ । गोर्खाहरुले भारतभूमिको सेवा र सुरक्षामा अरुभन्दा धेरै बलिदान दिएका छ्न् । भारतीय स्वतन्त्रता संग्राममा गोर्खाहरुको योगदान अविष्मरणीय छ । धेरै देशका लागि फाँसी चढे । स्वतन्त्रता संग्राममा पक्रा पर्ने वीर गोर्खाहरु सेलुलर जेलमा पनि परे र कति त्यतै सहिद भए । र, अरु सबै राज्यहरु भाषाको आधारमा गठन हुँदा गोर्खाल्यान्ड पनि पहिले नै अरु राज्यहरुसितै राज्य गठित हुनुपर्ने हो । शातिपूर्ण जुलुसमाथि गोलि प्रहार गर्नु बर्बरता र अमानुषिक दमन हो । दार्जीलिङ पहाडको गोर्खाल्यान्ड छुट्टै राज्यको माग संविधानसम्मत माग हो । यस मागलाई एसडीएफ पार्टी समर्थन गर्दछ । #स्रोत- फेसबुकबाट